လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 119
ဟင်္သာတက ပေးစာ၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂ ဟင်္သာတမြို့ရဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေတော့ မသိဘူးဗျာ။ မြို့ခံလူထုအတွက်တော့ သတင်းစာထဲမှာ လာဘ်စားတယ်ဆိုတာ ခဏခဏပါနေတော့ ရှက်မိပါတယ်။ မြို့လည်း သိက္ခာကျ ပါတယ်။ အရင်တုန်းက လာဘ်စားတာ ရှိပေမယ့် ဒီလောက် မများပါဘူး။ ဟင်္သာတနည်းပညာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသူလေး မ………… ကို ဇလွန်ရထား လမ်းတာဝန်ခံက မုဒိန်းကျင့်သည့် အမှု့ကို ဟင်္သာတတရားရုံးက တရားခံကို ပြစ်မှုကြီး အမှတ် (၃၆/၂၀၁၁)(၃-၃-၂၀၁၂) ဖြင့် တရားသေ လွှတ်ပေးခြင်း။ ယုန်သလင်းတိုက်နယ် မုဒိန်းမှုတခုကို ဟင်္သာတဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာကြည်စိုးက အသက် လိမ်ပေးခြင်း။ (လာစစ်တဲ့အဖွဲ့က တရားခံပိုင်သောသူတွေ) ဟိုတလောက ဓနုဖြူမြို့နယ်မှာ မိတဲ့ ကျွန်းတံခါး ၁၃ တန် တရားခံများကို လိုင်းကြေးယူ၍ ခတ္တတိမ်းရှောင်ခိုင်းခြင်း...
နှင်းမောင်(ဟင်္သာတ)၊ ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂ DENKO ပုဂ္ဂလိကဆီဆိုင်များတွင် အင်းစိန်လိုမြို့ နယ်တွေမှာ တစ်နေ့ တစ်ဂါလံ ပဲရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နေ့ခင်း ၁၂း၀၀ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာ ဆီတင် ဘောက်ဆာကားမလားသေး၍ ဆီမရသေးပါဟု စာများ ထောင်ထားပါတယ်။ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ တစ်နေ့ ၂ ဂါလံ နှုန်းဖြင့် သုံးရက်စာ ထုတ်လို့ရနေသော်လည်း အခုလိုလုပ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မိမိစားဝတ်နေရေးအတွက် ကားဆွဲနေသောကားသမားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၊ ပင်စင်စား လူကြီးများမှာ ဆီမရမချင်း နေ့တိုင်း လာပြီး တန်းစီနေရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အထက်လူကြီးများသိအောင် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မကြာသေးခင်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခကိစ္စရပ်များကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ခိုလှုံနေကြသည့် ရခိုင်လူမျိုးဒုက္ခသည်များအတွက် လူသားချင်းစာနာစိတ်ဖြင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သို့ ပြည်တွင်း/ပမှ မြန်မာပြည်သူ/သားတို့သည် လာရောက်၍ အလှူငွေများ၊ အလှူပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)သည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်ပြည်သူများအား တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် သွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ရန် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်မှ အသင်းသားများတို့သည် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အိုးခွက်ပန်းကန်များ၊ အဝတ်အထည်များတင်ဆောင်၍ ၂၄ ပေ မော်တော်ယာဉ်ကြီးဖြင့် ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံရှိ ရွှေပြည်သစ်ကားဂိတ်မှ နံနက် ၇းဝဝ နာရီအချိန်တွင် စတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ၉. ၇. ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်...
ကိုသင့်မြတ် ဇူလိုင် ၂၂၊ ၂၀၁၂ ပုံတွေကြည့်ပြီး လကမ္ဘာပေါ်မှာ သွားရိုက်ထားတယ်လို့ မယူဆစေချင်ဘူး။ လကမ္ဘာပေါ်မှာ အိမ်တွေ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ရောက်နေပြီ လားလို့ တွေးနေရင်အခက်။ ဆက်လေ့လာကြည့်ပါဦး။ ရွံ့တွေ ဗွက်တွေထူတဲ့လမ်းဟောင်းတခုကို ရိုက်ပြထားတာပဲလို့ထင်ရင်တော့ မှားလိမ့်မယ်ဗျာ။ နေ့စဉ် ကားကြီး ကားငယ် ယာဉ်ကြီးယာဉ် ငယ်တွေနဲ့လူတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ ကုန်တွေ တန်ပေါင်းများစွာ ကူးလားသွားလာနေတဲ့ လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပျက်နေတဲ့ တနေ ရာလောက် ကွက်ပြီးရိုက်ပြတာလည်း မဟုတ်ရပေါင်ဗျာ။ ပျက်လိုက်တဲ့လမ်းတွေဆိုတာ မြင်မကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ဒီလမ်းဟာ ပြည်ပကနေ ကုန်စည်တွေကို ၂၄ နာရီအတွင်း မြို့တော်ရန်ကုန်အရောက် တင်ပို့နေတဲ့ တခုတည်းသော လမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင် အံ့သြနေမလားပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုန်းလမ်းကနေ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် အကြီးဆုံးနဲ့...
အသဲကွဲ နိုင်ငံတော် အလံ ဖိုးထက်၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ အနှီ အမျိုးသား တစ်ယောက်သည် အကြင် အမျိုး သမီး တစ်ယောက်အား ချစ်ခွင့်ပန်သည် ဆိုပါအံ့။ ထို အမျိုးသမီးက ချက်ချင်း လက်ငင်း တစ်ထိုင်တည်း တုန့်ပြန် ဆုံးဖြတ် နိုင်သည်။ ချစ်ပါသည်။ မချစ်နိုင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့တည်းမဟုတ် စဉ်းစားပါရစေ၊ လေ့လာပါရစေဟု ဆိုအံ့။ မချစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုသည့် အဖြေများနှင့် စာလျှင် စဉ်းစား၊ လေ့လာခွင့်ပေးပါ ဆိုသည့် အဖြေသည် ချစ်ခွင့်ပန်သည့် ယောင်္ကျား တစ်ယောက်အတွက် ကြိုးစားခွင့် အခွင့်အရေး အများကြီး ရှိသည်ဟု ဆိုရမည်ပင်။ ကျနော် ကေသီ့ကို ချစ်ခွင့်ပန်သော အခါ ရှက်ရွံ့သည့်...
Page 119 of 130«1...117118119120121...130»